ग्लोबल आईएमई बैंकको खुद नाफा बढ्यो, प्रतिसेयर आम्दानीमा सुधार – Nepal Press
ग्लोबल आईएमई बैंकको खुद नाफा बढ्यो, प्रतिसेयर आम्दानीमा सुधार
२०७८ वैशाख १५ गते १२:५६
काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ ।
बैंकले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा ३ अर्ब ५७ करोड ८२ लाख रूपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८७ करोड ५६ लाख रूपैयाँ अर्थात ३२.४० प्रतिशत बढी हो । खुद मुनाफा बढेसँगै बैंकको प्रतिसेयर आम्दानीमा सुधार भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा १८ रूपैयाँ ९९ पैसा रहेको बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी, चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बढेर २२ रूपैयाँ ५ पैसा कायम भएको छ । यस अवधिसम्ममा बैंकको वितरण योग्य मुनाफा २ अर्ब ५६ करोड ४५ लाख छ ।
बैंकले आफ्नो व्यवसायमा गरेको वृद्धि, सञ्चालन खर्चहरूमा अपनाएको मितव्ययिता, डिजिटाइजेसनमा गरेको लगानी, वित्तीय साधन स्रोतको प्रभावकारी उपयोग तथा कर्जा असुलीमा प्राथमिकताजस्ता नीतिहरूको सफल कार्यान्वयनबाट उल्लेखित वित्तीय प्रगति गर्न सफल भएको छ ।
पछिल्लो ९ महिनामा बैंकको निक्षेप २ खर्ब २६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँबाट बढेर २ खर्ब ५८ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी, बैंकको खुद कर्जा लगानी १ खर्ब ९८ अर्बबाट बढेर २ खर्ब ३३ अर्ब ११ करोड पुगेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको आषाढ मसान्तमा १.७६ प्रतिशत रहेको निष्कृय कर्जा चैत मसान्तसम्म क्रमिक सुधार भई १.६१ प्रतिशत छ । बैंकको आधार दर ९.४१ प्रतिशतबाट ६.४० प्रतिशतमा र स्प्रेड दर ५.१८ प्रतिशतबाट ४.१७ प्रतिशतमा झरेको छ ।
#ग्लोबल आईएमई बैंक
प्रकाशित: २०७८ वैशाख १५ गते १२:५६
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो हुनुपर्छ ? अर्थमन्त्रीलाई कर्णालीवासीका यस्ता छन् सुझाव
पूर्वाग्रही धन्दाको अखडा बन्दैछ अर्थमन्त्रालय, इतिहासमै नभएको पजनी र आर्थिक संकट
मुक्तिनाथ विकास बैंकको ग्राहकलाई मेराकी होलिस्टीक वेलनेस रिट्रिटमा विशेष छुट
अबैध मोबाइल फोन रोक्न एमडिएमएस लागू व्यवसायीको आग्रह
नीति तथा कार्यक्रम खोक्रो र सारहीन भएको पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलको टिप्पणी (भिडिओ)
१० रुपैयाँ कर घट्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्छ कि घट्दैन ?
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको लाजिम्पाट शाखा नक्सालमा सर्‍याे